तोकिएको समयमा किन आउँन सकेन महानगरपालिकाको बजेट ? - samayapost.com
तोकिएको समयमा किन आउँन सकेन महानगरपालिकाको बजेट ?
समयपोष्ट २०७५ असार १० गते १४:३८
ललितपुर महानगरपालिकाले तोकिएको मितिमा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन । बजेटलाई लक्षित गरेर कार्यपालिकाको बैठक बस्न नसक्दा बजेट समयमा आउन नसकेको हो । यही असार २५ गते मात्रै बजेट सार्वजनिक गर्ने महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।
वडा नं २७ का अध्यक्ष बाबुराजा महर्जनले छलफल गर्दागर्दै बजेटलाई पूर्णता दिन नभ्याएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “ढिला भए पनि राम्रो बजेट ल्याउनुपर्छ ।” बजेटमाथि विस्तृतरुपमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।रासस